Ammaanka Magaalada Kismaayo oo si Weyn loo Adkeeyay – idalenews.com
Wararka naga soo gaaraya Magaala Xeebeedka Kismaayo ee Gobolka Jubada hoose ayaa sheegaya in ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyay.
Ciidamada Raas Kaambooniyiinta kuwa Milateriga iyo Amisom ayaa la sheegay in si weyn loogu dhex arkayo Xaafadaha kala duwan ee Magaalada Kismaayo gaar ahaana xaafadaha falalka amni darro laga filan karo.
Ciidamadan ayaa Koox Koox u dhax soconaya Xaafadahaas iyagoo Gaadiidka iyo cidda ay ka shakiyaan joojinya isla markaana Su’aalo weeydiinaya.
Wararka ayaa waxaa ay intaa ku darayaan sababaha Ciidamada loogu soo kordhiyay Magaalada in ay tahay iyadoo si aad ah ay u soo dhawaatay Tartankii Doorashada Madaxtinimada Jubba Land.
Waxaa kaloo ka mid ah Goobaha ammaankooda sida aadka ah loo xoojiyay Xarunta Madaxtooyada Magaalada Kismaayo halkaasoo la geeyay Ciidamo aad u hubaysan oo sugaya ammaanka goobtaas iyadoona xaruntaas lagu wado in ay ka dhacdo tartanka Madaxtinimada Jubba Land.
Dhinaca kalena waxaa Magaalada kismaayo maanta shir ku yeeshay Odoyaasha Dhaqanka Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo iyo wafdigii ka socday Urur Goboleedka IGAD kuwaasoo sida la sheegay ka wada hadlay dar dar gelinta hawlaha lagu soo gaba gabaynayo Doorashada madaxtinimada Jubba Land.
Isku soo duuboo Dad weynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka kale ee Goboladaas ayaa iminka u dhega taagaya Maamulka halkaas looga dhawaaqi doono iyo waxa uu ku soo kordhin doona Horumarka Goboladaas Sedaxda ah oo muddooyinkii danbaba ay ka soconayeen Hawlihii shir weynaha maamul u samaynta Gobolada Gedo iyo Jubbooyinka oo haatan maraya heer gaba gabo ah.
(DAAWO SAWIRADDA) Madaxweynihii hore ee Somaliya oo la kulmay Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Boston
Maamulka Galmudug oo si kulul uga hadlay Dilkii Saakay loo geystay Sarkaalkii iyaga ka tirsanaa